Yaraynta Saamaynta xun ee COVID-19 ku leeyahay Dalxiiska Hadda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Yaraynta Saamaynta xun ee COVID-19 ku leeyahay Dalxiiska Hadda
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda
Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Mudane. Edmund Bartlett, wuxuu u soo bandhigay XXV Congress-ka Mareykanka ee Golaha Wasiirrada iyo Mas'uuliyiinta Heerka Sare ee Dalxiiska maanta, Oktoobar 6, 2021. Soo-jeedintan waxaa loo sameeyey qayb ka mid ah Kalfadhiga 3-aad: Istaraatijiyadaha lagu yareynayo saameynta xun ee COVID-19 on Dalxiiska: Dhiirrigelinta iyo taageerada shirkadaha dalxiiska la xiriira.
Jamaica waxay hore ugu wargelisay xeeladaha dowladda iyo dadaallada lagu yareynayo saameynta xun ee masiibada ku yeelatay waaxda dalxiiska.
Dowladda Jamaica ayaa sidoo kale mudnaanta koowaad siisay kaalmada shirkadaha yaryar, kuwa yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah.
Faragelinta Wasiirka ee munaasabaddan ayaa diiradda lagu saaray ahmiyadda tallaalladu u leeyihiin soo kabashada dhaqaalaha adduunka iyo dalxiiska.
Waxaa halkan lagu soo bandhigay hadalladii Wasiir Bartlett:
Mahadsanid, Guddoomiye Madam.
Wafdiga Jamaica, shirarkii hore ee OAS iyo CITUR, waxay ku wargeliyeen xeeladaha dowladda iyo dadaallada lagu yareynayo saameynta xun ee masiibada waaxda dalxiiska. Tani waxay soo martay tallaabooyin hal -abuurnimo gaaban ilaa waqti dheer ah sida waddada adkeysiga dalxiiska si loo sii wado dhaqdhaqaaqa dalxiiska ee waaxda iyo sidoo kale xirmo kicinta J $ 25 bilyan ah oo loogu talagalay dhaqaalaha ballaaran, iyadoo loo qoondeeyay Deeq Dalxiis si loo caawiyo ganacsiyada ka shaqeeya waaxda saameeyay COVID-19. Dawladda Jamaica ayaa sidoo kale mudnaanta koowaad siisay kaalmada ganacsiyada yaryar, kuwa yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, iyadoo xustay in meheradahani ay yihiin laf -dhabarta dhaqaalaha Jamaica.
Faragelinteyda munaasabaddan waxay diiradda saari doontaa qodob kale oo ahmiyadda ugu weyn u leh soo kabashada dhaqaalaha adduunka iyo dalxiiska—tallaalada. Waxaan iftiiminaynaa baaqa, bishii Juun ee sannadkan, Madaxda Sanduuqa Lacagta Adduunka (IMF), Bangiga Adduunka (WB), Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) iyo Ururka Ganacsiga Adduunka (WTO) ee ku aaddan $ 50 bilyan oo doolar oo lagu maalgelinayo tallaalka sinnaanta qaybinta oo dhalin karta $ 9 tirilyan oo doollarka dhaqaalaha adduunka ah marka la gaaro 2025. Waftigaygu waxay si kal iyo laab ah u rumaysan yihiin “ma jiri doonto soo kabasho sal ballaadhan haddii aan la soo afjarin dhibaatada caafimaad. Helitaanka tallaalku waa furaha labada. ”
Nasiib darrose, marxaladdan masiibada ah, sinnaan la'aanta tallaalku way sii jirtaa halka xitaa in ka badan 6 bilyan oo tallaal ah loo qaybiyey, badidoodna waxay ku jiraan waddamada dakhligoodu sarreeyo halka waddamada saboolka ahi ay haystaan ​​wax ka yar 1% dadkooda. Waxaan isku raacsanahay in tallaalka caalamiga ah ee loo siman yahay uusan ahayn mid lagama maarmaan u ah akhlaaqda laakiin sidoo kale wuxuu soo bandhigayaa dareen dhaqaale oo dheer. Marka la eego astaamaha masiibada, iyo COVID-19, gaar ahaan, ma jiri karto dalxiis caalami ah oo joogto ah oo waara oo waddammada dakhligoodu hooseeyo ay ku hadhaan. Tani waa aasaaska Ajendaha 2030 ee Horumarka Joogtada ah - waaba intaasoo aan illoobin. Marka la eego arrintan, waxaan soo dhoweynaynaa oo aan uga mahadcelinaynaa hadiyadaha tallaallada ee ka imanaya lamaanayaasheena horumaray waxaanna ku adkaysan doonnaa in kuwani ay noqdaan hadiyado waqtigooda ku habboon oo wax ku ool ah, iyada oo la tixgelinayo taariikhaha dhicitaanka tallaallada.
Sida laga soo xigtay Ururka Dalxiiska Adduunka ee Qaramada Midoobay (UNWTO) horaantii toddobaadkan, soo -tallaalka caalamiga ah ee horumarsan ayaa ahaa hal qodob oo ka mid ah astaamaha dib -u -soo -noqoshada dalxiiska caalamiga ah bilaha Juun iyo Luulyo 2021. milyan oo dalxiisayaal ah ayaa ka gudbay xuduudaha caalamiga ah bishii Luulyo 54, oo hoos uga dhacday 2021% bishii Luulyo 67, laakiin wali waa natiijooyinkii ugu xoogga badnaa tan iyo Abriil 2019.
Waftigaygu wuxuu ku faraxsan yahay inuu ogaado in gobolkeenna Ameerika uu arkay isbarbardhig aad u yar marka la barbardhigo imaatinka dalxiisayaasha caalamiga ah oo ah 68% marka loo eego gobollada kale, iyadoo Kariibiyaanka uu muujiyey wax -qabadka ugu wanaagsan ee hoosaadyada adduunka. Kani waa war dhiirri -gelin ah si aan u iftiiminno dariiqayaga hore si aan u sii wadno soo kabashada. Sida Agaasimaha Guud Ikonyo-Iweala oo ka tirsan Ururka Ganacsiga Adduunka uu yiri, "soo kabashada dhaqaalaha iyo ganacsiga waarta waxaa lagu gaari karaa oo keliya siyaasad xaqiijineysa helitaanka tallaallada adduunka oo degdeg ah."
WHO waxay hoosta ka xariiqday heerarkii muhiimka ahaa ee lagu gaari lahaa 40% tallaalka caalamiga ah marka la gaaro Diseembar 2021 iyo 70% bisha Juun 2022 si loo soo afjaro masiibada. Waxaan haysannaa qalabkii lagama maarmaanka ahaa, oo indhaheennu waa inay ku jiraan abaalmarinta badbaadada iyo guusha qarnigan iyo jiilasha soo socda.
Markaan wajahayno qaybinta sinnaanta ee tallaallada u dhexeeya waddammada hodanka ah iyo waddamada dakhligoodu hooseeyo ee Koonfurta Koonfurta, waxaan wajahaynaa caqabad dheeri ah oo ka -hortagga tallaalka qaar ka mid ah muwaadiniinteena. Dadku waxay inta badan ka cabsadaan biyaha aan la aqoon, gaar ahaan marka la eego caafimaadkooda, macluumaadka khaldanina waxay sii huriyaan cabsidan.
Jamaica, oo ay ku noolyihiin ku dhawaad ​​3 milyan, waxaan gaarsiinay 787,602 qiyaasood, iyada oo 9.5% keliya dadka loo diiwaangeliyay inay yihiin tallaal buuxa. Dawladdu waxay adeegsatay farriimo hal -abuur leh si ay u wargeliso muwaadiniinta una dhiirrigeliso tallaalka. Iskaashiga dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ayaa la xoojiyay iyada oo heshiisyo lala galay shirkado si ay gacan uga geystaan ​​wadista tallaalka ee meelaha sida joogtada ah looga ganacsado sida suuqyada waaweyn iyo goobaha wax-iibsiga si loo fududeeyo helitaanka tallaallada. Waxaan maanka ku haynaa kuwa nugul oo dhexdeenna ka jira, marka la eego, adeegyada tallaalka guurguura ayaa loo hirgeliyey in lagu gaaro miyiga iyo qoysaska saboolka ah, waayeelka iyo dadka naafada ah oo laga yaabo inaysan awood u lahayn inay si fudud ugu safraan tallaalka.
Gaar ahaan warshadaha dalxiiska, Hawsha Tallaalka Dalxiiska waxaa loo abuuray inay tahay muujin kale oo iskaashi oo u dhexeeya waaxda dawladda (Wasaaradda Dalxiiska) iyo waaxda gaarka loo leeyahay (Hindisaha Tallaalka Waaxda Gaarka ah iyo Huteelka Jamaica iyo Ururka Dalxiiska) si loo fududeeyo COVID-19 tallaalka dhammaan 170,000 oo shaqaale dalxiis ah. Tani waa yool hami leh; si kastaba ha ahaatee, weli ma nihin kuwo niyad jabsan maadaama saddexda maalmood ee ugu horreeya barnaamijka, in ka badan 2000 oo shaqaale la tallaalay.
Waftigaygu wuxuu maanka ku hayaa kaalintii ay ka ciyaartay “siyaasadda faafa” taas oo caqabad ku noqon karta dadaalladeena soo kabashada. Arrintan, isku -duwidda iyo iskaashiga caalamiga ah ayaa fure u ah xaqiijinta aqoonsiga caalamiga ah ee tallaallada nabdoon oo wax -ku -oolka ah si aan loogu takoorayn si aan habboonayn tallaalka iyo socdaalka. Waxaan rabaa inaan ku celiyo qodobka takoorka. Faafida ayaa iftiimisay oo sii xumaysay sinaan la’aanta ka jirta gudaha iyo dalalka dhexdooda. Siyaasadahayaga iyo barnaamijyadeennu waa in ay ku wajahan yihiin ilaalinta nolosha iyo hab -nololeedyada si loo hagaajiyo tayada nolosha iyo horumar waara.
Dalxiiska oo ah ka ganacsiga adeegyadu aad ayuu muhiim ugu yahay waddamada Kariibiyaanka iyo Ameerika si ay gacan uga geystaan ​​shaqaalaynta, GDP -ga iyo abuurista sarrifka lacagaha qalaad. Maaddaama ay tahay shaqo xoog badan iyo dad-baahsan, faa'iidooyinka iyo khasaarahayagu si fudud ayay uga muuqdaan dhoolla-caddaynta iyo taaha shaqaalahayaga iyo dalxiisayaashayada. Haddii aan dadka hormarinno, waxaan heli karnaa waddo aan ku maro laakiin iskaashi iyo iskaashi heer walba ah.
Dowladda Jamaica waxay mar kale ku celineysaa ballanqaadkeedii ku aaddanaa caqiidooyinka dhinacyo badan ee Ururka Dawladaha Mareykanka (OAS) iyo ururada kale ee caalamiga ah. Marna si sax ah uma heli doonno siyaasadda tallaalka iskaashi la'aan. Marna ma arki doonno soo kabasho wax ku ool ah iskaashi la'aan. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan waddamada maanta wakiilka ka ah inay tixgeliyaan waaqica jira iyo sida ugu wanaagsan ee aan u wada shaqayn karno si aan u soo baxno xoog iyo adkaysi.